i-oblique photogrammetry - Chengdu Ruibo Technology Co., Ltd.
Izithombe ezithathwe amakhamera e-oblique khiqiza amamodeli e-3D anesinqumo esiphezulu futhi anemininingwane. Bona vumela amamephu e-cadastral anembe kakhulu ukuthi akhiqizwe ngokushesha futhi kalula, ngisho nasezindaweni eziyinkimbinkimbi noma ezinzima ukufinyelela kuzo. Abahloli bangakwazi ukukhipha izici ezithombeni, njengezimpawu, ama-curbs, izimpawu zomgwaqo, izintambo zokucisha umlilo namadrayini.
Ubuchwepheshe bokuhlola emoyeni be-UAV/drone bungasetshenziswa ngendlela ebonakalayo nesebenza kahle kakhulu (ngaphezu kwezikhathi ezingama-30 ngaphezu kokusebenza kahle kwezandla) ukuqedela ucwaningo lokusetshenziswa komhlaba. Ngesikhathi esifanayo, ukunemba kwale ndlela nakho kuhle, iphutha lingalawulwa ngaphakathi kuka-5cm, futhi ngokuthuthukiswa kohlelo lwendiza kanye nemishini, ukunemba kungathuthukiswa ngokuqhubekayo.
Ngosizo lwe-uav nezinye izinkampani zezindiza, ubuchwepheshe bezithombe ezitshekile bungaqoqa ngokushesha idatha yesithombe futhi bubone ukumodela okuzenzakalelayo kwe-3D okuzenzakalelayo. I-modeling manual yamadolobha amancane naphakathi nendawo ethatha iminyaka engu-1-2 ingaqedwa ezinyangeni ezingu-3-5 ngosizo lobuchwepheshe bezithombe ze-oblique.
Idatha yezithombe ze-Oblique iyidatha yesithombe elinganisekayo enolwazi lwendawo, engakhipha i-DSM, i-DOM, i-TDOM, i-DLG kanye neminye imiphumela yedatha ngesikhathi esifanayo, futhi ingangena esikhundleni sokuthwebula izithombe zasemoyeni.
I-3D GIS ibhekisa ku:
Idatha inokuhlukaniswa okucebile
Isendlalelo ngasinye siwukuphatha okugxile entweni
Into ngayinye inama-vector kanye nezici zemodeli ye-3D
Ukukhishwa okuzenzakalelayo kwezibaluli zangempela zento
yiziphi izinzuzo zamakhamera e-oblique ekuhloleni&GIS